Xiriirka UEFA awood sharci ah ma u heystaa inuu joojiyo European Super League?… (Miyuu dhaqan gelin karaa ganaaxyada uu ku hanjabay? Yaase guuleysan kara haddii maxkamad la isla gaaro?) – Gool FM
Xiriirka UEFA awood sharci ah ma u heystaa inuu joojiyo European Super League?… (Miyuu dhaqan gelin karaa ganaaxyada uu ku hanjabay? Yaase guuleysan kara haddii maxkamad la isla gaaro?)
Ahmed Nur April 20, 2021
(Yurub) 20 Abriil 2021. Waxaa wali soconaya doodaha kasoo horjeeda aas-aaska tartanka European Super League kaasoo ay ku dhowaaqeen 12 ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub.
Waxaa sidoo kale hadal heyn badan abuuray ganaaxyada ay ku hanjabeen xiriirrada waaweyn ee kubadda cagta sida FIFA iyo UEFA ee ku aaddan xiddigaha iyo kooxaha tartanka ka qayb galaya.
Haddaba suuro gal ma tahay in xiddigaha iyo kooxaha tartanka European Super League ciyaaraya ay ogolaadaan ganaaxyada kaga imaanaya UEFA? Awood sharci ah se UEFA ma ku hor istaagi kartaa tartankan cusub? Haddii dacwadooda ay gaarto maxkamada, yaa guuleysan kara?
Su’aalahaas waxaa ka jawaabay sharci-yaqaanka isboortiga ee Mark Orth, kaasoo qaba in UEFA halkaas ay guuldarro kala kulmi karto.
“Waxaan qabaa in kooxahaas (naadiyada ku mideysan Super League) ay heystaan kiis xoog badan” ayuu Orth u sheegay Daily Mail.
Sharci-yaqaankan ayaa ku doodaya in kooxaha tartankan cusub sameynaya ay heystaan fursad ay ku guuleysan karaan haddii dooddu ay maxkamad gaarto.
“Haddii kali talis loo ogolyahay inuu mamnuuco in la bilaabo tartan, marka maba loo baahno wax sharci tartan ah, haddii taas la ogolyahay, waxay taabaneysaa aas-aasiyaadka sharciga tartammada, waa inay jirtaa fursad suuq lagu abuuri karo” ayuu yiri gar-yaqaan Orth.
Orth ayaa tusaale usoo qaatay in shirkadda iibka online-ka ah ee Amazon aysan macaamiisheeda ka hor istaagi karin inay badeecadooda ku iibiyaan hillino kale oo online looga tukaameysto.
Sidaas si la mid ahna UEFA aysan diidi karin in kooxaha qaar ay sameystaan tartan iyagoo aanan ka bixin xeyndaabka xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub.
"Wax macno ah uma laha CR7 inuu kusoo laabto Real Madrid" - Florentino Perez
Waa kuma macallinka xiga ee shaqadiisa ku weynaya ka hor imaanshaha Super League kaddib Jose Mourinho?